नेपाल धितोपत्र बोर्डमा युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स र सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले आईपीओ निष्काशनको लागि अनुमति माग्दै - bampijhyala.com
Home > समाचार > वित्तिय > नेपाल धितोपत्र बोर्डमा युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स र सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले आईपीओ निष्काशनको लागि अनुमति माग्दै
०१ असार, बाँपीझ्याला, काठमाण्डौं । युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स र सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले आईपीओ निष्काशनको लागि अनुमति माग्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएका छन् । दुबै कम्पनीले आईपीओ निष्काशनको लागि जेठ ९ गते बोर्डमा निवेदन दिएका हुन ।
युनियन लाइफ इन्स्योरेन्सले रू. ६४ करोड ५० लाख बराबरको ६४ लाख ५० हजार कित्ता र सानिमा लाईफ इन्स्योरेन्सले रू. ६० करोड बराबरको ६० लाख कित्ता आईपीओ निष्कासनका लागि निवेदन दिएका हुन । दुबै कम्पनीको आईपीओ विक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल रहेको छ ।
युनियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको हाल रू. १ अर्ब ५० करोड ५० लाख रहेको छ । युनियन लाईफ इन्स्योरेन्सको आईपीओलाई इक्रा नेपालले समयमै वित्तीय दायित्व पुरा गर्न सक्ने संकेत गर्ने ‘इक्राएनपि आइआर ट्रिपल बि’ रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ । त्यस्तै सानिमा लाईफ इन्स्योरेन्सको हाल रू. १ अर्ब ४० करोड रहेको छ ।
सानिमा लाईफले निष्कासन गर्न लागेको आईपीओलाई केयर रेटिङ नेपालले वित्तीय दायित्व पुरा गर्ने सम्बन्धमा मध्यम सुरक्षित रहेको संकेत गर्ने त्रीपल बी माइनस रेटिङ प्रदान गरेको छ । दुबै कम्पनी नयाँ बीमा कम्पनीको रुपमा सञ्चालनमा रहेका हुन । जीवन बीमा कम्पनीहरुले कायम गर्नुपर्ने रू. २ अर्ब बराबरको चुक्तापूँजी कायम गर्न आईपीओ जारी गर्न लागेका हुन ।
फेरी प्रधानमन्त्री बन्न जालझेल नगर्नु : एमाले बरिष्ठ नेता नेपाल १ असार २०७८, मंगलवार १३:४५
पछिल्लो २४ घण्टामा ३ हजार १ शय ६ जना संक्रमित थपिए, थप २३ जनाको मृत्यु, निको हुनेको संख्या १ हजार ९ शय १६ १ असार २०७८, मंगलवार १३:४५
अबको निर्वाचनमा बहुमत ल्याएर देखाउँछौँ : एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली १ असार २०७८, मंगलवार १३:४५
बङ्गलादेशमा कोरोना भाइरसका सङ्क्रमित भेटिने क्रम बढ्दै गएपछि लकडाउनमा थप कडाइ १ असार २०७८, मंगलवार १३:४५
दोलखा जिल्ला मै पहिलो पटक दोलखा स्वास्थ्य चौकि दोलखालाई पोषण मैत्रि स्वास्थ्य संस्था घोषणा १ असार २०७८, मंगलवार १३:४५